Bani Ivato : tovovavikely iray maty tao anaty “piscine”, tsy hitan’ny mpanara-maso | NewsMada
Bani Ivato : tovovavikely iray maty tao anaty “piscine”, tsy hitan’ny mpanara-maso
Tao anaty “piscine” no maty ilay tovovavikely. Tsy nisy nahita ny antony nahafaty azy. Ny olona efa nanomboka niala tao anaty rano vao hita fa misy faty mitsingevana ao anaty rano ao…
Tsy mbola nisy tahaka ity! Tovavikely iray 13 taona no maty tao anaty “piscine” eny amin’ny Bani Ivato, ny asabotsy teo. Araka ny fanazavana, adiny roa taty aoriana vao hita fa maty ilay tovovavy ity. “Tsy nisy nahita izy io natelin’ny rano raha tsy efa nanomboka ny niala tao anaty rano ireo mpilomano marobe. Ankizy tety ivelany aza no nahita ilay zaza efa tsy nihetsika intsony”, hoy ny fanazavana azo.
Voalaza fa misy ireo miaramila miasa, mpanara-maso sy mpampianatra milomano tao an-toerana saingy tsy hitan’ireo ny zava-nitranga. “Variana ireo sa tsy nanao ny asany tsara?”, hoy ny fianakaviana. Raha ny fanazavana ihany, notezeran’ireo miaramila, ho tsy nanara-maso ny zanany ireo olona niaraka tamin’ity ankizivavy ity..
Nijanona teo ny olana ny asabotsy, nakarina an-tanety ny razana ary nentin’ny fianakaviana nody.
Nilaza anefa ireo fianakaviana fa tsy hanaiky moramora izao toe-javatra izao. Hametraka fitoriana izy ireo, fa miandry ny fandevenana ho vita, raha ny fanazavan’ny olona akaiky ny fianakaviana. “Tsy mety izao toe-javatra izao, ary mila fandraisana fepetra”, hoy ny fanazavana.
Iza no tompon’andraikitra voalohany amin’ny fanaraha-maso ny olona milomano anatin’ireny dobo filomanosana ireny? Raha ny fanazavana voaray, ireo mpiasan’ny dobo filomanosana aloha no tompon’andraikitra voalohany, izay indrindra ny asan’izy ireo. “Izy ireo no manara-maso, mampianatra, sns, rehefa ao anatin’ny dobo filomanosana. Misy kosa ny halalina tokony harahin’ny mpilomano arakaraka ny fahaizany sy ny taonany”, hoy ny fanazavana azo tamina tompon’andraikitra iray. Tamin’ity indray mitoraka ity, iza no tsy nandray ny andraikiny?